IMacBook Pro ene-32Gb ye-RAM ayinakufika de kube li-2018, ngenxa yemida kwiiprosesa ze-Intel | Ndisuka mac
IMacBook Pro ene-32Gb ye-RAM ayinakufika de kube li-2018, ngenxa yokusikelwa umda kwiiprosesa ze-Intel
Ukuba amahemuhemu aqinisekisiwe ngu DigiTimes, I-Intel inokulibazisa kude kube sekupheleni kwe-2018 ukuqaliswa kweemarike zeprosesa IChibi leCannon. Uqikelelo lokuqala lwaluphakathi ku-2017.Ngokuqikelela iMacBook Pro elandelayo iya kuba nezi processor njengoko zinokuhlala i-32 GB ye-RAM.
Nangona i-DigiTimes inexesha elidlulileyo lokutshekisha xa kufikwa kumba wokuqikelela iimveliso ezintsha, enye indlela, kule meko Ngokukhawuleza Apple, Ngeliqinisekisile eli nyathelo nge-Intel. Ibhlog ibonakalisa isilayidi senkampani ngocwangciso olutsha. Kwinqaku lokugqibela, singachaza iinkcazo zokuba i-Intel ibinokunika abasebenzisana nayo.
I-Intel ixelwe ukuba iyasokola kuyilo lwe-10nm. Iiprosesa zeCannon Lake, ezazicwangciselwe ukuba zikhutshwe ngo-2017, ziye zahlaziywa kathathu ukukhululwa: okokuqala ngasekupheleni kuka-2017 okanye ekuqaleni kuka-2018, emva koko phakathi ku-2018, ngoku ngasekupheleni kuka-2018.
Ukuba iindaba ziqinisekisiwe, iApple kuya kufuneka iphinde icinge uyilo lweMacBook Pro elandelayo.Xa kukhetha i-Intel processors, uluhlu olukhoyo ngeli xesha Ikhefu leKafesi. Ngamafutshane, kuthetha ukuba ukusetyenziswa kwe-LPDDR 3 RAM, kukhawulelwe kwi-16 Gb, xa kuthelekiswa neenkumbulo ze-LPDDR 4, eza kufumaneka kwiCannon Lake, ekwaziyo ukugcina i-32Gb ye-RAM.
Ngokukhutshwa kwe-2016 MacBook, Impikiswano enkulu yavela malunga nesidingo sokuba neekhompyuter ze-Pro ezinememori enkulu kune-16 Gb ye-RAM. Abaphuhlisi besicelo okanye iingcali kwihlabathi lokufota kunye nevidiyo zinokufuna le mali yenkumbulo. Kwelinye icala, iApple yathetha ngokusetyenziswa gwenxa kwezixhobo eziphathwayo.
Ukuba uqikelelo luchaziwe, i-Intel iyakuthathela ingqalelo ukulibaziseka kuluhlu lweeprosesa ezinokubona ukukhanya emva kweCannon Lake okanye ngokuthe ngqo Ice Lake, Umhla wokumiliselwa kwawo wawungo-2019.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IMacBook Pro ene-32Gb ye-RAM ayinakufika de kube li-2018, ngenxa yokusikelwa umda kwiiprosesa ze-Intel
Isiqendu sikaShakira eCarpool Karaoke sidutyulwe e-Barcelona kwaye sizakufumaneka namhlanje
UJessica Alba, uSheryl Crow, uDierks Bentley, uGwyneth Paltrow, kunye ne-will.i.am kwiCarpool Karaoke